दाङमा जारी भोटे मेलामा दर्शकको संख्या बढ्दो – Sidha Patra
आशिष केसी आइतबार, चैत्र ०१, २०७७
दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा न. ७ स्थित कालाखोलामा जारी भोटे मेलामा आज चौथो दिन पनि दर्शकको बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो । मेलाका सांस्कृतिक संयोजक दिपक कुमालका अनुसार हिजोको तुलनामा आज ९शनिबार० दर्शकको संख्यामा बृद्धि भएको हो ।
उनले भने – ञआज दर्शकको संख्या थामिनसक्नु थियो, आज शनिबार भएर पनि होला, अनि कलाकार पनि सबैलाई मनपर्ने हुनुहुन्थ्यो । आज चर्चित लोक गायक पुष्कल शर्मा, प्रेम विवश घर्ती, सचिन परियार, गायीका सिर्जु अधिकारी लगायत स्थानीय कलाकारहरुको प्रस्तुती रहेको थियो । मेलामा आफुहरुले उत्कृष्ट कलाकारहरु ल्याउन सफल भएको संयोजक कुमालले बताए । उनका अनुसार मेलामा आयोजकले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै दर्शक आएका छन् ।
यस्तै भोलि (आईतबार) गायक पशुपति शर्मा, कृष्ण रेउले लगायत स्थानीय कलाकारहरुको समेत प्रस्तुती रहने उनले बताए । मेलाको आकर्षणका लागि मौतकी कुवा, पिङ, बाल उद्यान लगायत अन्य मनोरञ्जनका सामग्रीहरु समेत राखिएको छ । मेलामा एक सय २० वटा व्यबसायीक तथा कृषि स्टलहरु राखिएको छ ।
साथै मेलामा ञहेल्पिङ ह्यान्ड दाङलेझ निस् शुल्क ञहेल्थ डेस्कझ को व्यवस्था गरेको छ । मेलामा दुर्घटना तथा आकस्मिक बिरामी परेका हरुका लागि मेला अबधिभर निस्शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष शालिकराम गौतमले बताए ।
तुलसीपुर एक्सप्रेस प्रालिको आयोजना, रानीघाट युवा क्लबको सह–आयोजना तथा तुलसीपुर उपमहानगर पालिका वडा न. ७ को संरक्षणमा लगाईएको ऐतिहासिक भोटे मेलामा ईतिहास झल्कने विभिन्न प्रस्तुति समेत प्रस्तुत गरिएको छ । मेलामा घोडा दौड प्रतियोगिताको समेत आयोजना गरिएको थियो ।
‘आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्वनका लागि ऐतिहासिक भोटे मेला २०७७’ भन्ने नाराका साथ यही फागुन २६ गतेदेखि सुरु भएको मेला चैत २ गते सम्म चल्ने मेलाका संयोजक दोर्ण आचार्यले बताए ।